Sida loogu wareejiyo fiidiyoow kombuyuutarkaaga ama mobiilkaaga - Creativos Online | Abuurista khadka tooska ah
Haddii aan fayl ku haysanno kombiyuutarkayaga ama haddii aan ku haysanno moobiilkeenna, mararka qaarkood waxay ku jirtaa meel khaldan. Oo haddaan eegno sida loo rogo fiidiyowga, waxaan aragnaa beddelaadyo kala duwan oo aan aad u cad. Qaarkood waxay sharxaan sida loogu sameeyo mobilka, qaarna kombiyuutarka. Kuwa kale waxay ku siinayaan oo keliya wax kale oo ku saabsan macruufka ama Android iyo marka laga hadlayo kombiyuutarada, Windows ama Mac. Marka way adag tahay in laga raadsado raadinta xalka qofku u baahan yahay wakhti kasta.
Dhibaatadaas ka timid dhanka Creativos Online awgeed waxaan dooneynaa inaan xallino arrintan. Beddelaadda aalado kala duwan, si marka aad dhibaatadan u gaarto, jalleec ahaan aad u xalliso su’aashaas. Ku calaamadeynta noocyadan noocyada ah kuwa ugu cadcad waxay ku imaan doonaan mustaqbalka, haddii ay dhacdo inaadan xusuusan mid ka mid ah codsiyada ama foomamka. Si aad u rogto fiidiyowga waxaa jira fursado badan, sidoo kale khadka iyo khadka tooska ah. Kee baa sahlan?
1 Wareeji video ah on your computer
1.2 Kujira WINDOWS
2 Wareeji video online ah
3 Ku wareeji fiidiyow casriga ah
3.1 Codsiga IPhone
3.2 Barnaamijka Android
Wareeji video ah on your computer
Barnaamij gaar ah oo loogu talagalay Mac ma aha mid u dhigma kan Windows. Sidoo kale barnaamij loo adeegsado labada madal isku mid ma aha. Mid kastaaba wuxuu leeyahay taabashadiisa iyo 'khiyaano'. Waxaan arki doonnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah oo ku jira tallaabooyin yaryar sida loo bixin doono, oo leh barnaamijyo si fiican u shaqeynaya iyada oo aan loo baahnayn xariijin, laakiin aad u adag in la qabto hawlo gaar ah. Xaaladda u baahan in la rogo fiidiyow miisaan culus leh, kuwani waxay noqon lahaayeen ikhtiyaarka ugu fiican, tan iyo, haddii aan isku dayno online waqtiga ay qaadataa runti waa wax laga xumaado.
Adeegsiga mac-da waxaan adeegsan doonnaa Final Cut Pro XWaxaan doorannaa fiidiyahayaga oo waxaan u soo dhoofsannaa jadwalkayaga. Ama xulashooyinka: Faylka> Soo rar ama adoo jiidaya waqtiga toos ah. Mar alla markii aan fiidiyowgeenna soo dejinno oo aan diyaar u nahay -oo leh soo-dejintii oo dhammaystiran-, waxaan aadeynaa qaybta saxda ah ee barnaamijka. Halkaas waxaan ku arki doonnaa 'cajalad filim' ah oo la yiraahdo 'Kormeeraha Muuqaalka'.
Waxaan gujinnaa ikhtiyaarka 'Isbadal' ka dibna aan aadno 'Wareeg'. Hadda waxaan u leexan doonnaa dhadhamin, giraangirta kor ama hoos. In kastoo aan sidoo kale qori karno tirada rabitaanka aan u baahanahay. Laakiin sida caadiga ah waxay ku jiri doontaa goobaha guud sida 270º, 90º, 180º iyo 0º.
Haddii aan isticmaalno Windows, waxaan isticmaali karnaa Sony Vegas: Sidii Final Cut, waxaan ku dari doonaa fiidiyowgeena wareega ee waqtiga Sony Vegas. Markaan sidan yeelno, waa inaan tagnaa Faylka> Guryaha. Qeybaha barnaamijka waxaan ku dhejin doonnaa cabirka si kadis ah. Taasi waa, haddii ay ku jiraan 1024 × 720, waxaan ku dhejin doonnaa 720 × 1024.
Sidaa darteed, cabirka fiidiyowgu wuxuu noqon doonaa isku mid laakiin markiisa saxda ah. Si loo buuxiyo wareeggaas, waxaan aadeynaa jadwalka waqtiga iyo geeska midig ee hoose ee mashruuceena, astaan ​​aan ugu yeerno 'digniin ama goynta dhacdo'. Waxaan ku gujineynaa badhanka saxda ah iyo xulashooyinka 'u dhigma dhinaca wax soo saarka'. Waxaan ku hagaajinaa wareegga gacanta ama markale waxaan ku dhejineynaa darajooyinka tirada. Marka si wanaagsan loogu hagaajiyo xallinta mashruuca, waxaan diyaarin doonnaa fiidiyowga aan u dhoofinno.
Wareeji video online ah
Barnaamijyada khadka tooska ah laguma kalsoonaan karo ee mashaariicda fiidiyowga culus. Tani waxay kuxirantahay astaamaha kumbuyuutarka, internetka iyo websaydhka laftiisa. Waa hab loo adeegsado beddel ahaan barnaamijyada kor ku xusan, tan iyo, hadday tahay fiidiyow yar, qaladka si dhakhso leh ayuu u xallin doonaa umana baahnid aqoon weyn si aad u fuliso.
Laakiin kiiskan, waxaan soo kordhin doonaa tusaale kaa badbaadin kara waqti kasta oo aad qaadato. Tan waxaa lagu magacaabaa: Video Wareeji. Waa wax fudud in la sharraxo mana u baahnaan doonno inaan hakanno waqti dheer. Sida aad ku arki karto sawirka, haddii fiidiyowgu ku yaal shabakadda ama haddii aad ku haysato kombuyuutarkaaga, waad iska xareysaa. Adoo adeegsanaya url ama faylka .mov tusaale ahaan. Waxaad dooraneysaa qaab fiidiyoow ah oo la doonayo, tilmaam jihada lagu wareejiyo iyo nooca riixo. Noocani waa uu sareeyaa, tayada yar ee fiidiyowgu yeelan doonaa iyo mugga yar ee uu ku fadhiyo, taas caksigeeda, culeyskeeda ayuu noqon doonaa.
Ku wareeji fiidiyow casriga ah
Waxaa jira dhowr beddelaad oo loogu talagalay macruufka iyo Android. Inkasta oo qaar ka mid ah bulshada dukaan kasta aysan haysan dib u eegis weyn. Isaga oo tusaale u soo qaadanaya mid kasta oo ka mid ah mashaariicda, waxaan xooga saaraynaa midka dhaliisha ugu fiican leh.
Markaad 'videos rotates' geliso App Store way noo fududahay inaan riixno adigoon eegin iibsiga ugu horeeya. Tani waxay dhacdaa markaan haysanno 'quusta' si aan u saxno qaladkaas fiidiyowgeena ah. Laakiin waan ku hungownay tii hore iyo ... waayo-aragnimadeennu waxay noqon kartaa jahwareer.
Codsiga aan kugula talineyno wareeji fiidiyoow dhaliishooda iyo adeegsiga aan isku daynay ayaa ah kan inShot - Tifatiraha Fiidiyaha
«App aad u fudud oo aad u dhameystiran. Waxaan kugula talinayaa 100% !!. Fikrad macaamiil
Sida macquul ahaan, haa codsiyada kumbuyuutarka ee kor ku xusan maaha bilaash, kuwani ma yaraan doonaan. Waad tijaabin kartaa oo waad arki kartaa sida ay yihiin si aad u ogaato haddii ay ku qancinayso. Laakiin ma aha codsi hal adeegsi ah oo si gaar ah loogu wareejiyo, maadaama ay leedahay astaamo fiidiyow oo fiidiyow ah. Qiimaha joogtada ah ee arjiga wuxuu ku wareegayaa .33,00 XNUMX. Laakiin waxaad ku iibsan kartaa astaamo kala duwan wax ka yar seddex euro, taas oo kuu oggolaan doonta inaad xoogaa marin u hesho. Tani waxay ku xirnaan doontaa waxaad u isticmaasho waxaadna u baahan kartaa oo keliya inaad furto midkood.
Haddii kiiskaaga aadan haysan kombiyuutar ama aad marin u heli karto macruufka iyo waxa aad haysato waa casriga ah ee loo yaqaan 'Android smartphone' si aad u qabato shaqadaada oo dhan, xulashada ugu badan ee lagu taliyay ayaa ah Wareeji Video FX. Ka xirfad badan Sawirada Google, in kastoo shaqooyinka yaryar, xitaa Sawirada Google ayaa ku siin kara ikhtiyaarka. Sida macruufka ah, barnaamijkan wuxuu ku siiyaa "wax ku iibsiga barnaamijka".
Waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu rogo fiidiyowyada, oo kuu ogolaanaya inaad wareejiso labada fiidyow ee aan ku hayno sawirka iyo fiidiyowyada aan duubeyno xilligaas saxda ah. Tani aad ayey faa'iido u leedahay marka ay tahay inaan si dhakhso leh wax u duubno oo aan macquul ahayn inaan qiyaasno sida ugu wanaagsan ee aan ugu duubno dhawr ilbiriqsiyo gudahood. Hadda, kama walwalaynno, maaddaama Wareegtada Video FX ay awoodi doonto inay ku hagaajiso soo-saarista Kadib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo rogo fiidiyoow kumbuyuutarkaaga ama mobiilkaaga
Instagram waxay galeysaa dhammaan suuqyada si ay ula tartamaan
Adobe waxay cusbooneysiisaa barnaamijyadeeda tafatirka fiidiyowga ee moobilka